Mpianatra nomena fanomezam-pahasoavana
Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana.» - 2 Tim. 2:15.
Aoka ny mpampianatra sy ny pianatra hijery ireo tombontsoa hahafahana mamboraka ny amin'i Jesosy ao anatin'ny resaka ifanaovana. Ny vavolombelona toy izany dia mahomby kokoa noho ny toriteny maro
Ry mpianatra, aoka ho tanteraka araka izay azo atao ny fiainanareo any an-tsekoly. Indray mandeha ihany no handalo io lalana io ianareo, ary sarobidy ireo tombontsoa izay omena anareo. Tsy hianatra ny fampianaran'i Kristy ihany no tokony hataonareo, fa hampihatra izany ihany koa. Manana tombontsoa hilaza ny fahamarinana mahafinaritry ny tenin'Andriamanitra ianareo eo am-pandraisana ny fanabeazana anareo. Hatsarao ny tombontsoa toy izany. Hitahy ny minitra tsirairay izay laninareo amin'ny fanaovana izany fomba izany Andriamanitra. Hazony ny fahatsoranareo sy ny fitiavanareo ireo fanahy, fa ny Tompo hitarika anareo amin'ny lalana azo antoka. Ny fanandramana sarobidy izay ho azonareo dia misy tombambidy mihoatra lavitra noho ny volamena na volafotsy na vato sarobidy.
Tsy fantatrao ny toerana izay mety hiantsoana anao amin'ny hoavy. Mety hampiasa anao tahaka an'i Daniela Andriamanitra, mba handray ny fahalalana ny marina ary hanome izany ho an'ireo manam-pahefan'ny tany. Miankina aminao ny hilazana raha toa ka handray fahaiza-manao sy fahalalana hanao izany asa izany ianao. Afaka manome fahaizana anao amin'izay rehetra ianaranao Andriamanitra. Afaka manampy anao Izy hanazatra ny tenanao hifanaraka amin'ny fianarana izay ataonao. Ataovy loha laharana eo amin'ny fanirianao ny hanangona ireo foto-kevitra marina sy mihaja ary manandratra. Irin'Andriamanitra ny hijoroanao ho vavolombelona ho azy. Tsy iriny ny hampilamindamina anao; iriny ny hihazakazahanao hanaraka ny lalan'ny didiny.
Fanirian'i Kristy ny hampiasa ny mpianatra tsirairay tahaka ny miaramilany. Tokony hiara-miasa amin'Ilay Iray izay nanolotra ny tenany ho anao ianao. Fitahiana lafo vidy toy ny ahoana re no ho tonga amin'ireo sekolintsika raha toa ka manokana ny tenany, ny fony, ny eritreriny, ny heriny ho amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra, ary miasa amin'ny maha-tanan'Andriamanitra azy ny mpampianatra sy ny mpianatra! Ho tanany izay manampy Azy ianao, raha toa ka mampifikitra ny tenanao amin'ny fiarovany. Hitarika anao amin'ny fomba azo antoka Izy, ary hahatonga anao ho afaka hanamboatra lalana mahitsy ho an'ny tenanao sy ny hafa. Hanome anao fahalalana sy fahendrena, ary hataony antonona anao ny asanao, ka ho afaka hanompo amin'ny fahafenoana ianao. -CPT, tt. 554,555.